एनाबोलिक स्टेरोइड बल्क कच्चा पाउडर RFQ
हामीलाई सम्पर्क गर्नु भएकोमा धन्यवाद! हामी तपाईंलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्नेछौं, मा फर्कनुहोस् घर पृष्ठ वा अधिक हेर्नुहोस् उत्पादनहरु.
हामीबाट अर्डर कसरी राख्ने?
हाम्रो वेबसाइटमा कुनै अनलाइन अर्डर प्रकार्य छैन, त्यसैले अर्डरहरू इमेल वा व्हाट्सएप मार्फत गरिन्छ:
❶ कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईलाई कुन उत्पादनहरू चाहिन्छ, र प्रत्येक उत्पादनको लागि मात्रा।
❷ हामी तपाईंलाई तुरुन्तै ढुवानी लागतको साथ उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्नेछौं।
❸ यदि तपाईंलाई मूल्य तपाईंका लागि उपयुक्त छ भन्ने लाग्छ भने, तपाईंले भुक्तानी गर्नको लागि भुक्तानी विधि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। (हामी बैंक स्थानान्तरण र Bitcoin, Tether स्वीकार गर्न सक्छौं)
❹ तपाइँको पार्सल भुक्तान पुष्टि भएको 12 घण्टा भित्र प्याक गरी पठाइनेछ।
❺ ट्र्याकिङ नम्बर र प्याकिङ तस्वीर पार्सल पठाएको २ दिन भित्र उपलब्ध गराइनेछ।
❻ तपाईंले पार्सललाई अनलाइन ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ र पार्सल स्थानीयमा आइपुग्दा हामी तपाईंलाई सूचित गर्नेछौं।
❼ सफलता मा पार्सल प्राप्त गर्नुहोस्।
उत्पादनको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्ने?
हामीसँग आफ्नै HPLC प्रयोगशाला र QC कार्यकर्ता टोली छ। COA, HPLC, HNMR र सम्बन्धित परीक्षण रिपोर्टहरू उपलब्ध छन्। तेस्रो पक्ष प्रयोगशालाहरू द्वारा परीक्षण कागजातहरू समय समयमा उपलब्ध गराइनेछ।
मैले अर्डरको लागि कसरी तिर्ने?
बैंक तार, बिटकोइन, टेदर (USDT)।
तपाईले कस्तो प्रकारको मेल प्रयोग गर्नुहुन्छ र डेलिभरी समय?
यो तपाइँको देश / ढुवानी ठेगाना मा निर्भर गर्दछ। सामान्य रूपमा, Fedex, DHL, EMS, HKDHL, HKEMS, केहि विशेष व्यावसायिक लाइन प्रदान गर्न सकिन्छ। डेलिभरी समय ढुवानी तरिकाहरूमा निर्भर गर्दछ, यसले Fedex वा DHL द्वारा 8-15 कार्य दिनहरू लिनेछ, यसलाई अन्य लाइनबाट 18-25 कार्य दिनहरू आवश्यक पर्दछ।
पार्सल वितरण सफलता दर के बारे मा?
हाम्रो सामान प्याकिङमा कुनै पनि हर्मोन जानकारी हुने छैन र चीनका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पठाउन सकिन्छ। हाल, हामीले संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपमा पठाउने सामान भन्सार क्लियरेन्स दर 99% छ, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, ब्राजिलको लागि धेरै उच्च बकल क्लोज रेट क्षेत्रको रूपमा, हामीसँग भन्सारबाट प्राप्त गर्ने नयाँ तरिकाहरू छन्। केही क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा पुन: पठाउने नीति पनि प्रदान गरिएको छ।
मेरो पैसा सुरक्षित कसरी ग्यारेन्टी छ?
हाम्रो कच्चा पाउडर को लागी प्रत्येक अर्डर सामान बाहिर पठाउनु अघि फिर्ता गर्न सकिन्छ। AASraw लाई सबै भुक्तानीको लागि, तिनीहरूले5वर्ष भित्र फिर्ता, भुक्तान, स्थानान्तरण, वा हामीले सक्ने कुनै पनि कुराको ग्यारेन्टी छन्।
त्यहाँ न्यूनतम अर्डर रकम सीमा छ?
हो, न्यूनतम अर्डर 10-100g छ, यो विभिन्न उत्पादनहरूमा निर्भर गर्दछ।
त्यहाँ कुनै नि: शुल्क नमूनाहरू छन्?
होइन, हामी नि: शुल्क नमूना छैन। तर हामी बल्क अर्डर अघि नमूना आदेश समर्थन गर्न सक्छौं। नमूना लागत (ढुवानी लागत समावेश छैन) तपाइँको अर्को अर्डर मा कटौती गरिनेछ।
के म बल्क अर्डरमा छुट पाउन सक्छु?
अवश्य पनि। तपाईंको अर्डर निश्चित रकममा पुगेपछि ठूलो छुट। म विश्वस्त छु कि मूल्य हाम्रो सहयोग अवरुद्ध हुनेछैन। हामी हाम्रो ग्राहकहरु संग दीर्घकालीन सहयोग निर्माण गर्न चाहन्छौं र हामी हाम्रो ग्राहकहरु लाई अधिक व्यापार प्राप्त गर्न को लागी समर्थन गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
के तपाईं आपूर्ति उपलब्धता को आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ?
अवश्य पनि, हामी स्टेरोइडको निर्माता हौं र आफ्नै कारखाना छ, सबै उत्पादनहरूको उत्पादन योजना प्रत्येक वर्ष हुन्छ। साथै, गोदाममा हाम्रो कच्चा पदार्थ एक प्रणालीद्वारा व्यवस्थित र व्यवस्थित गरिएको थियो, जसले समयमै आपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्नेछ।